Nnwom 80 NA-TWI - Ɔman foforoyɛ mpaebɔ - Tie yɛn, O - Bible Gateway
Nnwom 79Nnwom 81
Nnwom 80 Nkwa Asem (NA-TWI)
80 Tie yɛn, O Israel guanhwɛfo; tie yɛn, wo nguan sohwɛfo panyin. Wo a wote w’ahengua a esi atakraboa ntaban so no, 2 da wo ho adi kyerɛ Efraim, Benyamin ne Manase mmusuakuw no. Da w’ahoɔden adi; bra begye yɛn nkwa.